Ị nwere ike inyere m aka ịghọta otú e si ebuli ndetu Amazon ma bulie elu?
Ọ bụghị ihe ijuanya na ọ bụ ihe na-agaghị ekwe omume iji kpochapụ ndepụta Amazon site na ịde ederede ụda na ọbụna nkọwa zuru ezu nke nkọwa. Ntak-a? Nanị n'ihi na otu nchịkọta ọchụchọ nke algorithm na-achịkwa ahịa a jupụtara n'ahịa n'ahịa na-ewe ọtụtụ ihe dị iche iche na-echebara echiche mgbe ọ na-abịa inye ọdịdị ọkwa maka ihe ọ bụla na ire ere n'ebe ahụ. Nke ahụ bụ ihe mere ị ga-eji bụrụ otu nzọụkwụ n'ihu gị niche / ngwaahịa ụdị ndị iro ị ga-mkpa a-omimi nghọta nke Amazon SEO n'èzí gị igbe ndepụta. Ma ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị - ihe niile abụghị nke mgbagwoju anya dịka o nwere ike iyi ka ọ na-ele ya anya.
Ihe bụ na ị nwere ike ịmepụta ụzọ Amazon si bụrụ ụzọ ziri ezi naanị ma ọ bụrụ na ị na-eziga na ọkwa ziri ezi nke ọ na-ejighi ọkaibe A9 search ogo algorithm. N'ezie, A9 na-adabere na ụdị nhazi nke abụọ - ihe arụmọrụ, na ihe ndị dị mkpa - castalia dermopur reviews for.
arụmọrụ ịrụ ọrụ - na-emekarị mgbanwe na gburugburu ọnụọgụ dịka Pịa-site na ọnụego (CTR), ọnụego nke ntọghata, yana ọganihu ọhaneze gị na ọnụ ọgụgụ. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ihe ndị a na-egosi otú ị na-eme na ngwaahịa gị na afọ ahịa ndị dị ugbu a.
Ihe dị mkpa Nhọrọ - dị mfe, n'ihi na ihe ndị a na-egosi na ngwaahịa gị dabara na ajụjụ ọchụchọ ndị ọtụtụ ndị ahịa na-achọ ngwaahịa na Amazon. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ihe ndị bụ isi dị mkpa bụ ịkụ nzọ bụ maka ojiji ziri ezi nke isi okwu mkpokọta (na ogologo-tail search phrases), nakwa dị ka ihe kachasị mma ebe ị na - ewe iji bulie gị Amazon listings.
Na ihe niile ahụ nke arụmọrụ na mkpa ejikọtara ọnụ na iburu n'uche, ebe a bụ ndepụta nke ihe nkwụpụta maka gị iji nweta nnukwu foto nke njikarịcha ecommerce na ghota mkpuru ihe niile na uzo nke usoro. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịwelite ndepụta Amazon dịka ezigbo onye na-ere oge na onye ọkachamara SEO - niile na otu - tụlee aro ndị a dị irè edepụtara n'okpuru ma kwadoo na ọnụ ọgụgụ dị ike:
O nwere ike iyi ka ọ bụ onye na-enweghị ihe ọ bụla, ma peeji nke mbụ na nchọta ọchụchọ na-enwetakarị ihe niile clicks (ihe dịka 97%);
Ihe na-adọrọ mmasị bụ na ihe dị ka pasent 70 nke ihe ndị ahịa na-eji na-azụ ahịa na Amazon bụ ogologo nyocha ajụjụ;
A9 dị ka ebe a na-ahụ maka ọnọdụ dị mkpa, yabụ jide n'aka na ị maara ihe ị na-eme, ya bụ mgbe ị na-ahọrọ ebe kwesịrị ekwesị maka isi isiokwu dị na ngwaahịa aha gị, ndepụta nke isi okwu, nkọwa nke ngwaahịa n'onwe ya, na Onye ahịa Central backend ọchụchọ;
Inwe ihe nchoputa mkpuru okwu nke ogologo-tail na CTR tracker software bu ihe di oke mkpa maka onye obula n'inwe ihe n 'ahia, karia ihe obula;
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịwelite ndepụta Amazon gị n'ụzọ ziri ezi site na mmalite, lekwasị anya na mgbalị ndị isi SEO na-esote gị na-ebugharị CTR, dị ka aha ngwaahịa, ihe akara, setịpụ ego, ihe oyiyi ngwaahịa, FBA (Prime), nnweta ngwaahịa, ụdị ngwaahịa dị mma, akara nke ngwaahịa kacha mma, mbupu ụgwọ, njirimara / uru preview, na ihe ndị ọzọ ịzụ ihe.